मेरा लागि राजनीति नयाँ होइन: विद्या भट्टराई विद्या भट्टराई
जनतापाटी सोमवार, कार्तिक २५, २०७६, १७:०४:०० मा प्रकाशित
आगामी मंसिर १४ गते हुने निर्वाचनका लागि दलहरु अहिले घरदैलो कार्यक्रममा छन् । सबैको चासोको केन्द्रका रुपमा रहेको कस्की २ मा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाबाट स्व. रवीन्द्र अधिकारीपत्नी विद्या भट्टराईलाई उम्मेदवार बनाइएको छ ।
यसअघि स्व. अधिकारीले तीन पटकसम्म विजयी हासिल गरेको क्षेत्रमा उपनिर्वाचन हुन लागेको हो । यहि सन्दर्भमा नेकपा उम्मेदवार भट्टराईसँग जनतापार्टीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ।
लामो समयको विश्राम पछि राजनीतिमा फर्किनु भएको छ । अहिले प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा लड्दै हुनुहुन्छ । तपाईका चुनावी योजनाहरु के छन् ?
मेरा लागि राजनीति नयाँ होइन । केही समय विशेष परिस्थितिका कारण म प्रत्यक्ष राजनीतिबाट टाढा भएको पक्कै हो । अहिले समयले फेरि मलाई प्रत्यक्ष राजनीतिमा जोड्ने अवसर जुराएको छ ।
विद्यार्थी र महिला आन्दोलनले मलाई राजनीतिमा चिनाएको छ । मैले विद्यार्थी आन्दोलनकै समयमा देशका लागि केही गर्नुपर्छ भन्ने अठोट लिएकी थिएं र अब पुरा गर्ने साहस लिएर अगाडि बढ्ने अवसर आएको छ ।
मेरो पार्टी र जनवर्गीय संगठन सबैमा विद्यालाई निर्वाचनमा जिताउनुपर्छ भन्ने भावना छ ।
उज्यालो पोखरा, सडक स्तरोन्नती, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल समयमै सम्पन्न गर्नुछ । निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउँदा आउने गतिरोध अन्त्य गर्न म भूमिका खेल्ने छु ।
सङ्घीय सरकारका सशक्तिकरणका काम ल्याउन प्रयत्न गर्ने छु । सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमका कुरा जुन ल्याइरहेका छौँ । दैनिक जीवनसँग जोडिएका, पूर्वाधार विकास, सामाजिक न्याय प्रणालीलाई कसरी वितरणमुखी बनाउने, संस्थागत कसरी गर्ने भन्ने कुरामा आधारित रहेर म मेरा कामहरू अघि बढाउँनेछु ।
धेरैले श्रीमानको मृत्युपछि चुनावमा आएको भनेर आलोचना पनि गरिरहेका छन् । यहि क्षेत्रबाट रवीन्द्र जीले ह्याट्रीक गर्नुभएको थियो । अबको निर्वाचनमा पनि यो कायमै रहला ?
हामी हरेक कुरालाई राजनीतिक विषय बनाइरहेका हुन्छौँ । आरोप लगाउनेहरुले लगाउन पाउँछन्, मैले उहाँहरुलाई केही पनि भन्दिन् । मैले त आफूलाई साझा उम्मेदवारका रूपमा लिएकी छु । मलाई हिजो तपाईं निर्वाचनमा आउनुपर्छ भन्ने मत पार्टीभित्र त थियो नै । बाहिर रहनुभएका रवीन्द्रजीसँग सम्बन्ध भएका धेरै हुनुहुन्छ । उहाँलाई विश्वास गर्ने धेरै हुनुहुन्छ । रवीन्द्र जीप्रतिको विश्वास नै हो । किनभने उहाँ त नेता हो नि त हिजोको ।
त्यो सम्बन्ध ममा ट्रान्सफर हुन पाउँदैन र ? कसैले मलाई सहानुभूति राख्यो रे ! विद्याप्रति कसैले माया र सद्भाव राख्न पाउँदैन ? मनोवैज्ञानिक सम्बन्ध हुँदैनन् ? मलाई के लाग्छ भने, यो क्षेत्रका हरेक मान्छेको मनमा बस्न म आइरहेकी छु । होला, हिजो रवीन्द्र जी बसेको मान्छेको मनमा म बसँे होला ! आरोप लगाउन त पाइयो । तर त्यो आरोपमा कति सत्यता छ भन्ने कुरा त भोलि पुष्टि हुँदै जान्छ ।
हिजोदेखि नै यहाँका जनताले कम्युनिस्टमाथि विश्वास गर्नु भएको हो । अहिले त हामीसँग स्थानीय सरकार छ । प्रत्यक्ष रूपमा त्यो सरकारसँग जनता जोडिनुभएको छ ।
यो निर्वाचनमा हामी सरकारका सकारात्मक काम लिएर जनतासामु पुग्छौँ । हाम्रो योजना पनि लैजान्छौँ ।
रवीन्द्र जी को स्थान तपाईंले कायम राख्न सक्नुहुन्छ ?
तीन पटकसम्म यहाँका जनताले एक प्रिय नेतालाई विजयी गराएर पाठाउनु भयो । केही समयअघि उहाँलाई हामीले गुमाउन पुग्यौँ । पछिल्लो पटक २०७४ सालको निर्वाचनमा ५ वर्षका लागि पनि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको उम्मेदवारलाई विजयी गराएर पठाएको हो । जुन विश्वास र आशा लिएर तिस्रो पटक दुई वर्षअघि नेकपाको उम्मेदवार एक प्रिय नेता रवीन्द्र जी लाई विजयी गराएर पठाउनु भएको थियो त्यो अधुरो रह्यो ।
तर जनमत आज पनि कायम नै छ । मैले जित हासिल गरिसकेपछि त्यो जनमतलाई असर नपर्ने गरी प्रतिबद्ध जनप्रतिनिधिको रुपमा भूमिका खेल्नेछु । ममाथि किन संवेदनाको मत लिन आएको भन्ने प्रश्न उठेको छ । हामी शोकलाई शक्तिमा बदलौं भनेर लागिरहेका छौं । एउटै परिवारमा दुवैजना राजनीतिमा आउँदा दुवैको गति रोकिन सक्छ भन्ने ठानेर एउटाको गति बढाउन म केहीपछि बसेकी थिएँ । म प्रचारमा देखिइनँ होला । तर राजनीतिक चेत छोडेको छैन । म खुला किताब हुँ । जतिबेला पनि पढ्न सक्नुहुन्छ ।
उपनिर्वाचमा पार्टीले तपाईलाई नै उम्मेदवार बनाउनुको कारण के ?
त्यो अकल्पनिय दुर्घटना पछि मलाईनै उम्मेदवार बनाउनु पर्छ भन्ने सबैको विचार आयो । एकखालको सहमति र जनमत पनि देखियो । कास्की २ मा पनि त्यही प्रकारको जनमत थियो । यी सबै कुराको कदर गर्दै मलाई उपनिर्वाचनमा उठाइएको हो ।
नेविसंघ विघटनको संघारमा, आज अन्तिम म्याद बुधवार, माघ २, २०७५, ०९:१८:००
'सिके राउतसँगको हचुवा सम्झौताले सरकारको वजन घटायो' : माधव नेपाल सोमवार, फाल्गुन २७, २०७५, १५:३८:००
नयाँ वर्षबाट वुद्ध एयरले कोलकाता उडान थाल्ने बिहिवार, फाल्गुन २, २०७५, १३:४४:००